DEG DEG: Kenya oo DF ka dalbatay inay baaris deg deg ah ku samayso shilka AE (Digniin loo diray) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DEG DEG: Kenya oo DF ka dalbatay inay baaris deg deg ah...
DEG DEG: Kenya oo DF ka dalbatay inay baaris deg deg ah ku samayso shilka AE (Digniin loo diray)
(Nairobi) 05 Maajo 2020 – Kenya ayaa si rasmi ah Somalia u waydiisatey inay baaritaan ku samayso wax ay ku sheegtay “duruufo aan kala caddayn” oo ku hareeraysan dayuurad yar oo dalkaa laga leeyahay oo shalay Berdaale ku dhacday.
Dayuuraddan oo saanad dawo ah oo loogu tala galay caabuq-sidaha Covid-19 u siddey magaaladaasi ayaa lasoo ridey, iyadoo ay ku dhinteen 6 qof oo ay 4 ka tirsani Kenyan ahaayeen kuwaasoo ay laba duuliyeyaal yihiin, iyadoo uu shilku dhacay shalay galab 3.30.
“Shilkani wuxuu ku dhacay duruufo aan kala caddayn. Dayuuradduna waxay ka shaqaynaysay howlo samafal oo la xiriira Covid-19,” ayay tiri Wasaaradda Gaadiidka Cirka ee Kenya.
Previous articleWar cusub oo kasoo baxay cidda riddey dayuuraddi AE & sababta (Xog hoose oo naxdin leh)
Next article”Kaa aqbali mayno!” – MW Maraykanka oo telefoonka si xun ugu canaantay Dhaxal-sugaha Sucuudiga